Subaru sy MLS Soccer Team Host Vaovao Manaova Fetin'ny Alika
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Subaru sy MLS Soccer Team Host Vaovao Manaova Fetin'ny Alika
Subaru of America, Inc. androany dia nanambara fa amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Union Union, ny fiara dia handray ity hetsika ity amin'ny alahady 24 oktobra, natokana hanome alika any amin'ny faritra lehibe any Philadelphia ny andro tsara indrindra amin'ny fiainany.
Nantsoina hoe "Make A Day's Fest Fest", ny hetsika mandritra ny andro dia manasa ireo tia alika, tompona alika ary fikambanan'ny biby fiompy ao an-toerana mankany Subaru Park, tranon'ny Union Union, mba hankalaza ny sakaizany volo. Ho an'ireo mitady hitondra namana saka volo iray azy ireo, Make a Day's Fest Fest dia hampiditra foara fananganana alika amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana mpiompy ao an-toerana. Ny mpitsidika dia afaka mihaona alika maherin'ny 100 azo alaina * ary raha liana amin'ny fanomezana trano be fitiavana ho an'ny biby fiompy izy ireo, dia hosaronany ny saram-pananganana. Hanasongadinana ny hetsika ny sakafo, ny lalao, ny fampisehoana ary ny alika iray kilaometatra izay ahafahan'ny alika mihazakazaka, mandeha ary mandeha mahazo loka.
“Izay manana amboa dia mahalala fa mandeha mihoatra ny lavitra izy mba hanatsara ny androntsika. Tamin'ity taona ity, izahay tao Subaru dia nanapa-kevitra ny hamerina ilay fankasitrahana amin'ny andro iray natokana ho an'ny fananahana sy fahafinaretana miaraka amin'ireo alika kely ao amin'ny Subaru Park, "hoy i Alan Bethke, filoha lefitra Senior an'ny Marketing, Subaru of America, Inc." Manantena izahay fa hisy andro miaraka amin'ireo namantsika - olombelona sy canine - any amin'ny faritr'i Filadelfia lehibe kokoa ary mamporisika izay rehetra alika alika alika mba hijanona ary hihaona amina namana akaiky indrindra. "
"Miorina amin'ny fahombiazan'ny programa fananganana alika amin'ny andron'ny Union lalao, fantatray fa Make a Day's Fest Fest dia ho fipoahana ho an'ireo mpitia alika sy biby fiompy," hoy i Tim McDermott, filohan'ny Union Union. "Amin'ny maha-fikambanana mikendry voalohany ny fiaraha-monina dia zava-dehibe ho antsika ny mitady fomba hamerenana sy hanatsarana ny fiainan'ny alika sy ny fianakaviana ao amin'ny faritr'i Filadelfia."
Make a Day's Fest Fest dia hatao ao amin'ny Subaru Park (2502 Seaport Dr. Chester, PA 19013) eo anelanelan'ny 10a.m. EST sy 4p.m EST. Ireo liana hanatrika dia tsy maintsy misoratra anarana alohan'ny hahatongavany ao amin'ny philadiumunion.com/form/subaru-dog-day-fest.
Ny hetsika Make a Dog's Fest hetsika dia ao anatin'ny tetikasan'ny mpanamboatra fiara Subaru Loves Pets, izay natokana hanampiana ireo biby fiompy mila fanampiana.
* Ny fananganana alika dia tsy mety hitranga eo an-toerana ao amin'ny Subaru Park ary izay liana amin'ny handraisana ireo alika eo an-toerana dia tsy maintsy mankany amin'ny toeram-pialokalofan'ny biby mba hamita ny fizotry ny fananganana.